Alexa na-ebute ụzọ na CES dị ka ihe ọzọ na Google Assistant | Gam akporosis
The ọtụtụ ihu nke Alexa na ya mkpa dị ka a virtual nnyemaaka
Nke a gara aga Las Vegas CES nwere nwere mkpa ka ukwuu karịa mbipụta ndị gara aga, karịsịa n'ihe metụtara smart, AI na enyemaka nke ọma. Onye enyemaka olu Amazon nke a maara dị ka Alexa na nke a mụrụ na Amazon Echo, aghọwo otu n'ime ndị nkịtị nke ngosi ahụ site na ịpụta na ngwaahịa dị iche iche ewepụtara na ọtụtụ nkwekọrịta ndị ọzọ na ụdị dị mkpa dịka Volkswagen na Ford.
Mgbe anyị na-ekwu okwu banyere Google Home ọtụtụ oge, mmalite a nke 2017 amalitela na Alexa ịbanye na gas ka ọ bụrụ otu n'ime nkwụsi ike kachasị ike maka enyemaka enyemaka. N'ime ihe dị ka ụbọchị ole na ole, aha olu olu Amazon na-ada ụda dị iche iche dị ka ngwaahịa yana na anyị anakọtara na ibe anyị n'ọtụtụ isiokwu. Ọbụghị naanị ndị a, mana ọtụtụ ndị ọzọ enyela ederede na CES na anyị na-anakọta iji gosi mkpa nke Alexa maka afọ ndị na-abịa.
1 Nnukwu ihe ọzọ na Homelọ Google
2 Alexa njikọ ngwaọrụ
Nnukwu ihe ọzọ na Homelọ Google
Na nghọta m, ụlọ Google bụ n'ọkwa ọzọ n'ihe bụ ya na ihe nwere ike iduga na mkparịta ụka mmadụ na igwe. Amazon emelitere Alexa nke mere na ị ghọtara ihe gbasara gburugburu, mana ọ bụ kama usoro nke usoro na ahịrịokwu ndị akọwapụtara na-eme ka ị ghọta na ị ghọtara akụkụ nke ihe gbara ya gburugburu, mana ọbụnadị nso ihe nnukwu G rụzuru na Google Assistant, ebe ọ bụ kwere ka okomoko nke ighota isi okwu nke okwu di nkpa ka anyi ghara ikwughari otu okwu oge niile. Ihe dị iche a dị ezigbo mkpa mgbe ọ bịara na mmekọrịta a dị n'etiti igwe-igwe.
Ya mere, anyị ghọtara ọdịiche dị n'etiti Alexa na Google Assistant, ọ bụ ezie na n'okwu banyere inye ikikere, na CES na Las Vegas, onye enyemaka Amazon enweela ike ịnọ na ezigbo ụyọkọ ngwaọrụ ọhụrụ, ígwè ọrụ ntanetị na ọbụna azụmahịa nwere nnukwu udiri dika mmadu abuo ahuru aha ha na akuku ugboala. Lee ka anyị kwuo na Amazon jisiri ike jikwaa ngwaahịa ọ nwere n'aka iji ree ya na ụdị ndị ahụ niile ghọtara na ihe ọ na-enye karịrị ezuru friji, ụgbọ ala ma ọ bụ robot nke na-abịa anyị ịnabata anyị. mgbe anyi ruru ulo.
N'ezie, a chọrọ ihe karịrị ihe Alexa na-enye, mana ugbu a, anyị nwere ike ịsị ihe karịrị Google. Anyị ga-ekwukwa na ọ were afọ ole na ole iji hụ ngwaahịa mbụ na mpụga nke Alexa, ebe nnukwu G na-eme mgbanwe site na Google Assistant ruo ndị ọzọ nke sistemụ ya, a na-enyefe mmegharị ahụ nke ọma tupu anyị ahụ Google Home na-ebupụ omume ọma ya.
Alexa njikọ ngwaọrụ
Anyị emeela Huawei Mate 9 nke a ga-ebido na Alexa; ka Aristotle dere, dika osisi nzọ isonye umuaka n’ulo dika robot; Lenovo "Amazon Echo" nke na-ebu Alexa; LG ewebata onye inyeaka na friji na nke ahụ ọhụụ ọhụrụ pụrụ iche robot; ma ọ bụ Lynx, ndị robot na-eje ije, na-ekwu okwu ma nwee iwu olu nke ozo di na Google Home nke na - acho onu ogugu.
N'ezie, m ga-agafe ọtụtụ ngwaọrụ ndị gafere CES nwere Alexa dị ka ngwa nke na-ege ntị ma na-erube isi, mana site n'okwu ahụ, anyị nwere ike ịghọta oke olu enyemaka Amazon. Ugbu a, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị kedu ebe ndi ozo no, ebe ọ bụ na ugbu a naanị anyị ghọtara enyemaka olu site na Google Home na Alexa, iji chefuo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Siri, nke yiri ka agwakọtara na-enweghị ike ịhapụ Apple.
Ọ ga-abụ a afọ na-adọrọ mmasị maka enyemaka olu site na ngwaahịa dị iche iche. Anyị ga-ahụ ya agbakwunyere n'ụzọ zuru oke na ngwa na ọrụ karịa ka anyị na-eche n'echiche, dị ka anyị siri mara ụbọchị ndị a mgbe Google Assistant nọ na Android Wear 2.0 na gam akporo TV, mana o doro anya na Alexa nọ ebe a ka ọ nọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The ọtụtụ ihu nke Alexa na ya mkpa dị ka a virtual nnyemaaka
Alcaltel A3 XL, ama ọzọ gosipụtara na CES 2017